PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-11-05 - Masiqinisele noma kunzima ukuphila
Masiqinisele noma kunzima ukuphila
OHLELWENI lwethu esilwenza nomroza njalo kusukela ngehora leshumi nambili kuya kwelesithathu emini, sike saxoxa nensizwa ogama layo nguscelo Ncube.
Le nsizwa ingenye yezikhulumi ezaziwayo ezisencane la esifundazweni sakithi. Le nsizwa esencane
ibhale incwadi esihloko sithi: I Was Raped And You Were Born - My Mom's Letter That Nearly Killed Me.
Ngiyacabanga ukuthi usuke wamlalela ekhuluma ngalolu daba lwakhe.
Usuku nosuku uvusa imiphefumulo yabantu ngobufakazi bakhe nesimo akhulele kuso. Le nsizwa ibhadame iqiniso ebelifihliwe iminyaka ngeminyaka, lokuthi unina wadlwengulwa, nokwathi kuso leso simo wakhulelwa yona.
Ichaza ngobuhlungu eyabuzwa, ukuhlala kwayo emgwaqeni, nokuvuka izithintithe ifune ikusasa layo eliqhakazile.
Ukuqinisela, ukubekezela nokuphokophela phambili, kuyiyona nto emise le nsizwa kuze kube manje. Izihlakaniphi nabacwaninga indlela yokuphila, bayasazisa ukuthi siyazidinga lezi zinselelo uscelo adlule kuzo ukuze sibe nobufakazi futhi sisimamise nabanye abantu.
Lezi zinselelo okuthiwa nakuba zibuhlungu kodwa siyazidinga, zinomsebenzi onzulu eziwenza kulabo abangazange bazame ukuzigwema nokuzibalekela. Bayaye babonakale ngemiqhele eyahlu- kahlukene, uzwe beba namagama avelele emhlabeni, kubhalwe ngabo izincwadi ezinohlonze, baklonyeliswe ngezindondo emikhakheni eyahlukene yempilo.
Laba bantu abakhula baphile ngaphansi kwezimo ezinzima bagcina sebehlonishwa emhlabeni wonke futhi baba yisifundo ezizukulwaneni eziningi ezibalandelayo. Abantu abafana nomfundisi obuye abe umculi ohlonishwayo eningizimu Afrika, usolly Mahlangu, naye owatholakala emuva kokudlwengulwa kukanina omzalayo ngokocansi.
Kukhona nowesifazane wasemelika ohlonishwayo emhlabeni wonke, igama lakhe ngu-oprah Winfrey - ungomunye esifunda ngaye ukuthi wakhula nje eyintombazanyana ekhulela emapulazini, wakhula ehlukunyezwa ngokocansi eneminyaka ecishe ibe yishumi nje.
Usungacabanga ikusasa lentombazanyana ethi iqala ukuvula amehlo ibe iwavulela kubantu abanesihluku, bayiphuce lokho okuyigugu kuyo, nabazali bayo, ikhule izwa iminjunju yokuhlukunyezwa.
Kumele ngabe inikwa uthando nemfundiso yokuthi uma isikhulile kumele ibe ngumama onjani, ibe ngowesifazane onjani, ibe ngunkosikazi onjani kodwa esikhundleni salokho ithi ivela nje izithele ohlotsheni lwabantu abangenanembeza futhi abangenandaba nekusasa layo, bayihlukumeze iminyakanyaka ingazi ukuthi izotshela bani.
Ngifisa ukukutshela ukuthi leyo ntombazanyana yathi noma izwe ubuhlungu obungaka empilweni yayo kodwa yathi ngizoba ngowesifazane ovelele nowaziwa umhlaba wonke, lobu buhlungu ngizobuphendula umqhele wempumelelo, ukuhlupheka, ukuntula nobubha engikhulele kubona ngizobuphendula ingcebo okuyokhulunywa ngayo emhlabeni wonke.
Umyalezo ebengifisa ukuwudlulisa kuwena uthi asiqinisele noma kubuhlungu futhi kunzima ukuphila, singabheki ukuthi sinemfundo engakanani nokuthi sihlwempu kangakanani kodwa silwele ukuthi kuyona leyo nhlupheko kuphume abantu abayoqhakaza emhlabeni kuhle kwezinkanyezi zezulu, amagama abo angakhohlakali emphakathini, sekuyibo abacobelela izizwe ezahlukene ngamasu okumelana nezinkinga zokuphila.
Ukuqinisela ezinkingeni zethu, nokuqhubeka namaphupho ethu kube sengathi akwenzeke lutho, kuyosinika umvuzo waphakade ngoba nezizukulwane eziyosilandela, ziyokwazi ukuthi kwake kwaphila abantu abanjengathi emhlabeni, ababekhule behlupheka, bebukelwa phansi kodwa baqhubeka bakhuluma izinto ezinkulu, ngalokho umhlaba wase uyabahlonipha.